Izibalo ezi-3 eziMangalisayo ezixhasa ukuThengiswa kweNtlalo | Martech Zone
Izibalo ezi-3 eziMangalisayo ezixhasa ukuThengiswa kweNtlalo
NgeCawa, ngoMatshi 15, 2015 NgoMgqibelo, Matshi 14, 2015 Douglas Karr
Olunye lweempawu eziqhelekileyo endiqhubeka ndizibona kwezona zinto ziphucukileyo zophuhliso lwamashishini okanye abathengisi kukuba banxibelelana kakuhle kakhulu.
Umhlobo wam olungileyo uDoug Theis woDibaniso oluDibeneyo, i Inkampani ye-Indianapolis esekwe kwiinkonzo ngomnye wabo bantu. Siye kwisidlo sakusasa saseIndianapolis seJenali yaseShishini kwaye bendiqhula ndisithi uDoug kunokwenzeka ukuba wazi wonke umntu okwelo gumbi. Ngapha koko, sanikwa amatikiti ngumntu esisebenza naye uHarry Howe - owathi uDoug wandazisa ukuba andifundise ukukhula kunye nempumelelo of DK New Media.
UDoug akayazi nje wonke umntu, uthatha ixesha ukugcina unxibelelwano kwaye uhlala ebonelela ngexabiso. Elo xabiso limenze waba sisixhobo esingabalulekanga kwimarike yetekhnoloji ye-Indianapolis. Kwaye, ewe, yenza umsebenzi kaDoug ekuthengiseni lula kakhulu kuba ethembekile kwaye uhlala enxibelelana.
Unoko engqondweni, ayothusi into yokuba kukho amanani-manani anika ubungqina bokuba imithombo yeendaba ezentlalo esekwe kakuhle kunye nobukho benethiwekhi kubalulekile ngokunjalo:
Iipesenti ezingama-78 zabathengisi usebenzisa ukuthengisa ngaphandle kumajelo eendaba oontanga babo.
Iipesenti ezingama-73 zabathengisi abebesebenzisa ukuthengisa kwezentlalo kuphumelele oontanga babo.
60% ukufunyanwa kwesabelo esikhulu Abameli bezentengiso abasebenzisa intengiso yentlalo.
Ukuzimisela ngokwakho kwimidiya yoluntu, ukumamela ngenyameko ngamathuba okusebenzela uluntu lwakho, kunye nokuzibandakanya kwimidiya yoluntu Amanyathelo ama-3 alula achazwe yiSalesforce kwintengiso esebenzayo yentlalo. Ukubonelela ngexabiso, ungaze ubeke kwaye uzibeke endaweni yakho njengesixhobo kubaluleke kakhulu kwintengiso yokuthengisa impumelelo kwi-Intanethi!
Ukuthengisa kungakunceda njani ukuThengisa?
Iqela lakho lokuthengisa ziingcali zonxibelelwano ezijolise kulawulo lweenjongo kwaye zinceda ekufumaneni ithemba lokuwela umgca wokugqibela. Oko kwathethi, zikwizingcali ukuba apha ziimfuno zamathemba imihla ngemihla. Ngaba isebe lakho lentengiso libonelela ngesiqulatho esifanelekileyo ukubanceda bakhe ixabiso kunye nokuzibeka ngokwabo njengobutyebi? Izifundo zamatyala, amabali omsebenzisi, amaphepha amhlophe, infographics… zonke ezo zixhobo zinokubanceda benze ukuba iingcali zakho zentengiso zibonakale zintle kwi-intanethi kwaye zibonelele ngexabiso abalifunayo.
tags: ukuthengisaintengiso infographicukuthengisa kwezentlalo
Imidiya yokuncokola Yenza kunye nezinto ongazenziyo